Ukuhlala kweMukteshwar Orchard-Family Suite (Sunbird) - I-Airbnb
Ukuhlala kweMukteshwar Orchard-Family Suite (Sunbird)
Igumbi lakho lokulala e ifama sinombuki zindwendwe onguAnupam
UAnupam ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uAnupam iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Ifumaneka eMukteshwar ikhaya lethu legadi yeziqhamo, lithe ngcu phezu kwenduli, phakathi kwegadi yeziqhamo engapheliyo, ejikelezwe ziintlambo kwaye igadwe ziincopho zeHimalaya. I-Sunbird Family Suite edweliswe apha, ibekwe kumgangatho osezantsi, ineebhedi ezimbini ezinegumbi lokuhlambela elinye. I-suite ayinakho ukufikelela kwi-balcony, kodwa inokufikelela kwiigadi kunye neengca. Ukuze ufumane ezona mbono zilungileyo, iindwendwe zinokungena kwindawo yethu yokutyela kunye neengca.
-Sine-6 Mbps ye-wifi ye-intanethi
-I-Airtel, iJio kunye neVodafone 4G isebenza ngokundilisekileyo.
MALUNGA NGESITHUBA SETHU:
Nokuba leliphi ixesha lonyaka, siyakumema ukuba uphumle, uphefumle umoya omtsha wasezintabeni kwaye ubukele intaphane yeentaka ze-Himalaya zisenza umsebenzi wazo wemihla ngemihla kwigadi yethu yeziqhamo echumileyo. Zinza kwindawo yethu yokuchithela iholide okanye uzulazule kwindawo ephithizelayo yebhabhathane yeentyatyambo zasendle. Sinamagumbi ayi-7 xa ewonke. Olu luhlu lolweSunbird Family Suite kuphela, ebekwe kumgangatho osezantsi.
Indawo yethu yokuhlala ikunika indawo epholileyo kunye neyenzelwe wena, ekuvumela ukuba uzive usekhaya. I-Sunbird Family Suite ifakelwe izinto zale mihla ezifana nebhedi yobukhulu bokumkani, iqhiya, iTV, indawo yamanzi ashushu nabandayo, iWiFi njl. Ukuhamba nje ezitiyeni kuyahlaziya kakhulu. Ngemini ecacileyo, unokubona iincochoyi ezininzi ze-Himalaya ukusuka kwingca eqhelekileyo. Sineendawo zokuhlala ezintle kwingca, apho ungathanda ukuphunga ikomityi yekofu okanye uchithe nje imini ufunda incwadi oyithandayo.
I-Sunbird Family Suite edweliswe apha, ibekwe kumgangatho osezantsi, ineebhedi ezimbini ezinegumbi lokuhlambela elinye. I-suite ayinakho ukufikelela kwi-balcony, kodwa inokufikelela kwiigadi kunye neengca. Ukuze ufumane ezona mbono zilungileyo, iindwendwe zinokufikelela kwindawo yethu yokutyela kunye neendawo eziqhelekileyo zengca.
Sibekwe kwindawo yelali eneendawo zokuchithela iiholide ezimbalwa kunye namakhaya ezilalini kufutshane. Uninzi lwale ngingqi yigadi yeziqhamo kunye namasimi nje. I-Sunbird Family Suite edweliswe apha, ibekwe kumgangatho osezantsi kwaye inokufikelela egadini. I-suite ineebhedi ezimbini eziphindwe kabini kunye negumbi lokuhlambela elinye. Kukho amanye amagumbi amathandathu kwi-cottage (engakhankanywanga kolu luhlu). Onke amagumbi anendawo yokungena ezimeleyo.
Ukuba uthanda ukukhwela intaba, ukuhamba ehlathini, ukunxibelelana emaphandleni, siqinisekile ukuba uya kuba nexesha elimnandi lokuhlala nathi.
Umbuki zindwendwe ngu- Anupam
I'm a former marketing professional who has worked in the hospitality industry for a decade, and now live in Mukteshwar, Uttarakhand with my family and have been running a boutique homestay, a cafe and a bakery for the last five years. My love for the Himalayas made me shift to the Kumaon hills, and now I want to help people experience the unique beauty of these mountains and the rural lifestyle that makes it a special corner of the Himalayas. I specialise in taking guests into the heart of a Kumaoni village, making them experience living with nature in the traditional eco-friendly and zero waste lifestyle, and how to incorporate this knowledge in their day-to-day urban life.
Abasebenzi bethu baqeqeshwe kakuhle ukuba banakekele uninzi lweemfuno zakho. Kwimeko apho ufuna nasiphi na isikhokelo sasekhaya sokubona, uhambo oluya kwilali njl.njl., nceda usazise kwangaphambili. Siya kukuvuyela ukukulungiselela izikhokelo kwiindleko ezongezelelweyo.
Abasebenzi bethu baqeqeshwe kakuhle ukuba banakekele uninzi lweemfuno zakho. Kwimeko apho ufuna nasiphi na isikhokelo sasekhaya sokubona, uhambo oluya kwilali njl.njl., nceda usazi…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Mukteshwar